UNksz uPhumelele Ndumo, umeluleki wezezimali
Abantu abagade ingozi yentela futhi bangaxhamazeli endleleni abakhokhela ngayo izikweletu njengoba bebaningi abaphelelwe yimisebenzi ngenxa yeCOVID-19. Lesi yiseluleko sikaNksz uPhumelele Ndumo, umeluleki wezezimali. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
ABANTU abadiliziwe njengoba kuqubuke iCOVID-19 nabazothola imali yabo yempesheni kanjalo neyokudilizwa kumele baqaphele imali yabo ingagcini iphelela kwintela ngenxa yendlela abakhetha ukuyisebenzisa ngayo.
UMnu uBongani Mtolo, uNksz uPhindile Gwala, uNksz uMandisa Mpeko, uNkk uCarol Bouwer noMnu uThemba Nkosi, odume ngelikaDJ Euphonik
Indlela ibuzwa kwabaphambili. Khohlwani wukugabisa ngezinto eziwubukhazikhazi, osomabhizinisi abadala bagcwalise lesi saga ngenkathi beluleka intsha engosomabhizinisi. UZANELE MTHETHWA uyabika
USOMABHIZINISI owusondonzima emikhakheni wokudidiyela izinhlelo zethelevishini weluleke intsha ukuthi ingenzi amaphutha enziwa yibona ngoba bephushwa yingcindezi yokufuna udumo.
UMnu uChris Magagula wuqweqwe emkhakheni wezamanzi olwandle
WENZA ezibukwayo embonini yamanz’ olwandle nakuba kunemicikilisho ewundendende. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe lweminyaka
UMTHETHO ogqugquzela ukuthi kube noguquko kwezomnotho oluzovulela abantu abamnyama amathuba, iBlack Economic Empowerment (iBEE), awuthelanga zithelo ezitheni embonini yezamanzi olwandle ngoba izinkampani eziningi ezikhona ngezakwamanye amazwe nokwenza ukuthi zingayigqizi qakala indaba yalo mthetho ngoba aziwudingi.
UMnu uThebe Ikalafeng, uNksz uSphelele Mjadu, uNks uNoni Gasa, uNkk Nokuthula Magwaza noMnu uSylvester Chauke eDurban ICC
ICOVID-19 ishaye kwezwela emhlabeni, kwawa amabhizinisi kodwa futhi iwalethele amathuba amasha. UZANELE MTHETHWA uyabika
KUKHUTHAZWE osomabhizinisi ukuthi basebenzise izinselelo ezidalwe yiCOVID-19 ukubheka izindlela ezintsha zokusimamisa amabhizinisi abo. Loku kuvele kuleli sonto esithangamini sosomabhizinisi engqungqutheleni iDurban Business Fair (iDBF) eNkosi Albert Luthuli International Convention Centre eThekwini.